Intsebenziswano enzulu phakathi kweShuangliang neMoutai |
UMoutai, yenye yeempawu zotywala ezidumileyo eTshayina nakwihlabathi liphela. Utywala baseTshayina kuZwelonke. Umsebenzisi weemveliso ezininzi zeShuangliang.
Kutshanje, u-Shuangliang Eco-Energy unikezele nge-mega ye-odolo “yeProjekthi yoPhuculo loKhuselo lokusiNgqongileyo yokurisayikilisha kwamanzi apholisayo kwi-Moutai Brewing Workshop”, eya kuthi ibe nefuthe elihle kwintsebenzo yexa elizayo, kwaye ikwaqaphele ukuphinda kusetyenziswe imithombo yamanzi eChishui UMlambo, owawudlala indima ebonakalayo ekukhuseleni indalo yoMlambo iChishui.
Le projekthi ikakhulu ibandakanya ukusebenza kunye nokugcinwa kwesitishi sezaMandla, ukuhanjiswa kunye nokufakwa kwesixhobo sokufaka amanzi kwiLiBr (heater), ezifudumeleyo nezivaliweyo, iinkqubo zokudibanisa kunye nokusasaza iinkqubo, iinkqubo zolawulo lwezikhululo zamandla kunye nezinye izixhobo ezixhasayo.
UShuangliang noMoutai bebesebenzisana phantse iminyaka eli-10. Ukusuka kwiibheyili zokuphakama okuphezulu ukuya ekufunxeni iifriji ekusebenzeni ngokukrelekrele kunye nolondolozo, uShuangliang ebekhonza uMoutai ngombono wokusebenzisa amandla ngokufanelekileyo.